Iimpawu ezili-10 zeqela elizimeleyo lokuziququzelela
Eyona Agile Iimpawu ezili-10 zeQela lokuziQhelanisa ne-Agile
Enye yezona zinto zibalulekileyo kuseto lwe-Agile olunempumelelo kukuba neqela eliziququzelayo. Oku kukhankanyiwe kwi I-Agile ebonakalayo :
' Ezona zakhiwo zingcono, iimfuno, kunye noyilo luvela kumaqela aziququzelela ngokwabo '
Amaqela azicwangcisayo, njengoko igama lisitsho, bathathe uxanduva kwaye balawule eyabo imisebenzi kwaye ungaxhomekeki emkhombeni ukuba ubaxelele into amabayenze.
Makhe sibone ukuba iqela eliqhelekileyo lokuzilungiselela li-Agile libukeka njani:
Ubunini: Ngokubanzi iqela liqela labantu abaqolileyo abathatha amanyathelo kwaye bazisebenzele kwaye abalindeli inkokeli yabo ukuba yabele umsebenzi. Oku kuqinisekisa ubungakanani bobunini kunye nokuzinikela.
Inkuthazo: Inkuthazo yeqela sisitshixo sempumelelo. Amalungu eqela kufuneka ajolise kwaye anomdla emsebenzini wabo.
Ukusebenzisana: Iqela linokulawula owalo umsebenzi ngokunxulumene nolwabiwo lomsebenzi, uqikelelo lomsebenzi, uphuhliso lwamabali kunye novavanyo kunye nokuhanjiswa kwe-sprint eyimpumelelo njengeqela. Bamele basebenze njengeqela kunokuba basebenze njengeqela labantu. Ukusebenzisana kuyakhuthazwa.
Uqeqesho: Iqela lishiyeke ukuba lenze eyona nto ilungileyo- ukuhanjiswa kwesoftware- kodwa basafuna inqanaba lokucebisa kunye nokuqeqesha kunye nokwenza lula ngeScrumMaster yabo, kodwa abadingi 'myalelo nolawulo.'
Intembeko nentlonipho: Amalungu eqela ayathembana kwaye ayahloniphana. Bakholelwa kubunini bekhowudi kunye kunye nokuvavanya kwaye bakulungele ukuya kwi-mile eyongezelelweyo ukuncedana ukusombulula imiba.
Ukuzibophelela: Unxibelelwano kwaye okona kubaluleke kakhulu ukuzibophelela kwabantu kubalulekile kwiqela eliziququzelayo le-Agile. Amalungu eqela ayanxibelelana ngakumbi, kwaye azinikele ngokupheleleyo ekwenzeni imisebenzi yabo ngokwahlukeneyo nanjengeqela. Kukho imithendeleko eyahlukeneyo yeSkram efana nentlanganiso yokuma mihla le, ukulungiswa kwamabali kunye nokubhangiswa, okukhuthaza iingxoxo zeqela.
Ukusebenzisana: Iqela liyaqonda ukuba ukuhambisa isoftware ngempumelelo, kufuneka baqonde iimfuno kwaye aboyiki ukubuza imibuzo ukuze bacacise ukungathandabuzeki kwabo. Ukusebenzisana rhoqo kunye Umnini weMveliso ibalulekile.
Ubuchule: Abantu kufuneka babe nobuchule kulo msebenzi bawenzayo. Oku kuya kubangela ukuzithemba emsebenzini wabo kwaye kuya kuphelisa isidingo sokhokelo oluvela phezulu.
Uphuculo: Ukuqhubeka nokuphucula izakhono zabo kunye neengcebiso ngezinto ezintsha kunye nokuphuculwa.
Ukuqhubeka: Iqela elitsha lithatha ixesha ukukhula kwaye lizilungiselele. Ixesha elongezelelekileyo, banokuyiqonda imikhwa yabo yokusebenza njengeqela, ke ukutshintsha ukwakheka kwayo rhoqo akuncedi. Kungcono ukuba amalungu eqela asebenze kunye ixesha elifanelekileyo.
Ukwenza iqela eliziququzelayo kwi-Agile ayisiyonto ilula kwaye kuthatha ixesha elifanelekileyo ukuyenza. Rhoqo, iScrumMaster kufuneka iqeqeshe kwaye iququzelele nasiphi na isithako esingasentla ukunceda ukukhawulezisa ukusekwa kwamaqela e-Agile azilungiselela ngokwabo.
I-iphone 12 pro max iindleko
Ukuntywila-Ungawugcina njani uMzimba wokuPhendula
Uyikhusela njani ifowuni yakho ekucofeni epokothweni kunye nokuthumela imiyalezo kubantu abangahleliyo
I-Huawei Bukela i-2 vs Samsung iGear S3 Frontier
I-Samsung kunye neapos; s Galaxy Tab S7 kunye neTab S7 + amanqaku aphezulu kwizaphulelo kwintengiso enkulu yangoLwesihlanu omnyama